မီးပြတိုက်: Who Moved My Cheese ?
Posted by SLIP in Who Moved My Cheese?
စာဖတ်ခြင်း အကြောင်းပြောပြီးတဲ့နောက်မှာ အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်များထဲက တစ်အုပ်မှာပါတဲ့ ဒဿနလေးတွေကို ကောက်နှုတ် တင်ပြပါအုံးမည်။ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ Dr. Spencer Johnson ရဲ့ Who Moved My Cheese ?
ဒိန်ခဲကို ပိုင်ဆိုင်ရခြင်းသည် အဟောသုခံ ချမ်းသာစွ။
သင့်အတွက် ဒိန်ခဲက အရေးကြီးလေ၊ ဒိန်ခဲကို လက်မလွှတ်ဘဲ ကိုင်ထားချင်လေပဲ။
သင်ဟာ အပြောင်းအလဲမလုပ်လျှင်၊ သင့်ဘ၀ ဆုံးခန်းတိုင်သွားနိုင်တယ်။
မင်း မကြောက်တော့ဘူးဆိုရင် ဘာဆက်လုပ်မလဲ ? ။
ဒိန်ခဲကို ခဏခဏ နမ်းကြည့်ပါ၊ ဒါမှ မှိုတက်မတက်သိရမှာ။
လမ်းသစ်ကိုလိုက်ရင် သင့်ဒိန်ခဲ ရှာပုံတော်အတွက် အကူအညီရလိမ့်မယ်။
ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုကျော်လွှားပြီး သင်ရှေ့ဆက်သွားရင် လွတ်လပ်မှုအရသာကို သင်ခံစားရမယ်။
ကျွန်တော့စိတ်ထဲမှာ ဒိန်ခဲတွေကို မတွေ့ခင် တကယ်စားရတယ်ထင်လာတယ်၊ ဒါကြောင့် ဒိန်ခဲရှိတဲ့နေရာကို ရောက်တော့မယ်ထင်လာတယ်။
ဒိန်ခဲဟောင်းကို မြန်မြန်သံယောစဉ်ဖြတ်နိုင်လေ ဒိန်ခဲသစ်တွေဖို့ မြန်လေပဲ။
ဒိန်ခဲမရှိတော့တဲ့နေရာမှာ စောင့်ဆိုင်းနေရတာထက် ၀င်္ကပါထဲကို လျှောက်သွားနေရတာက ပိုပြီး အန္တရာယ် ကင်းတယ်။
အတွေးအခေါ်ဟောင်းများသည် ဒိန်ခဲအသစ်ရှိရာသို့ သင့်အား လမ်းညွှန်နိုင်မည်မဟုတ်။
ဒိန်ခဲအသစ်ကို ရှာတွေ့ပြီး စားသုံးနိုင်ပြီလို့ သင်မြင်လာတဲ့အချိန်ဟာ သင့်ဘ၀လမ်းကြောင်း တစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲသွားချိန်ပဲ။
မသိမသာ အပြောင်းအလဲကလေးများကို စောစောစီးစီး သတိထားမိမယ်ဆိုရင် နောင်တွေ့ရမယ့် ဧရာမ အပြောင်းအလဲကြီးများကို ရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေတယ်။
အပြောင်းအလဲဆိုတာ ဖြစ်မြဲဓမ္မတာပဲ အဲဒီအပြောင်းအလဲက ဒိန်ခဲကို အမြဲတမ်း နေရာရွှေ့ထားတယ်။
အပြောင်းအလဲကို ကြိုတွေးထားပါ၊ ဒိန်ခဲနေရာ ရွှေ့ထားမယ့်အတွက် အသင့်ပြင်ထားပါ။
အပြောင်းအလဲကို သတိနဲ့စောင့်နေပါ၊ ဒိန်ခဲကို မကြာခဏနမ်းကြည့်ပါ။
အမြန်ဆုံး လိုက်လောညီထွေပြောင်းလဲပါ။ အပြောင်းအလဲကို ချစ်မြတ်နိုးပါ၊ စွန့်စားခန်းကို တန်ဖိုးထားပါ၊ ဒိန်ခဲအသစ်ကို အရသာရှိရှိ သုံးဆောင်ပါ။
နောက်တစ်ကြိမ် အမြန်ပြောင်းလဲဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပါစေ။
--> Heaving Cheese Makes You Happy.
--> The More Important Your Cheese Is To You The More You Want To Hold On To It.
--> If You Do Not Change, You Can Become Extinct.
--> What Would You Do If You Weren't Afraid?
--> Smell The Cheese Often So You Know When It Is Getting Old.
--> Movement In A New Direction Helps You Find New Cheese.
--> When You Stop Being Afraid, You Feel Good!
--> Imagining Yourself Enjoying You New Cheese, The Sooner You Find New Cheese.
--> The Quicker You Let Go Of Old Cheese, The Sooner You Find New Cheese.
--> It Is Safer To Search In The Maze, Than Remain In A Cheese less Station.
--> Old Beliefs Do not Lead You To New Cheese.
--> When You See That You Can Find And Enjoy New Cheese, You Change Course.
--> Noticing Small Changes Early Helps You Adapt To The Bigger Changes That Are To Come.
--> Change Happens - They Keep Moving The Cheese.
--> Anticipate Change - Get Ready For The Cheese To Move.
--> Monitor Change - smell The Cheese Often So You Know When It Is Getting Old.
--> Adapt To Change Quickly - The Quicker You Let Go Of Old Cheese, The Sooner You Can Enjoy New Cheese.
--> Be Ready To Change Quickly And Enjoy It Again & Again - They Keep Moving The Cheese.
Anonymous says5February 2008 at 04:04